Shiinaha AUMARK TX warshad iyo soosaarayaasha | Foton
Buuxin baahiyaha saadka magaalada, hareeraha magaalada iyo masaafada gaaban.
Qol Hal / Hal saf iyo badh
Saldhigga gawaarida 2800-4700
Culayska Curb 2035-4830
HANKA DHEXE LDT OO LOOGU TALAGALAY HORUMARKA FARSAMADA SI LOO HORUMARIYO U QAADASHADA Shiinayska LDT La kulan magaalada, baahiyaha saadka ee u dhexeeya magaalada, hareeraha magaalada iyo masaafada gaaban, Naqshadeynta kooxda isticmaaleyaasha ee leh baahiyo dhaqaale oo sarreeya.
Muraayad Dib u eegis ah
Tailight caadi ah
Mashiinka waxqabadka sare wuxuu soo saari karaa awood deeqsi ah, qalabka 'ZF gearbox' wuxuu si xor ah u beddelaa, tamarta firfircoonida ayaa isla markiiba qarxa.
Awoodda Cagaaran ee Foton
BJ493 Mashiinka Taxanaha
Xuddunta ugu badan: 202N.m / r / min
LOVOL Xuddunta Powerax: 202N.m / r
Mashiinka Taxanaha Phaser
Xuddunta ugu badan: 445N.m / r / min
Qaab dhismeedka Truck
Saqaf adag iyo Ergonomic Fadhi
Tijaabooyinka Saamaynta Saqafku waxay xaqiijiyeen in saqafku u adkeysan karo xoogagga muhiimka ah. Nabadgelyada darawalnimada iyo raaxada ayaa ku dhex jira qolka fadhiga leh iyo suumanka nabadgelyada oo tayo sare leh.
Qalabka ikhtiyaariga ah ee ABS wuxuu xoojiyaa waxqabadka amniga.
Qalabka gawaarida wuxuu ka kooban yahay qaab-dhismeedka si dhammaystiran loo jeexjeexay oo leh xirmo la xoojiyay.
Guga Leaf Guga: Ilaa iyo 17 ilo caleen gadaal ah, oo ah tirada ugu badan ee alaabada la midka ah, xamuulka ugu fiican
Chassis wuxuu khuseeyaa birta birta ah ee xoogga sare leh, wiish wadista laba qaybood ah iyo naqshad yar oo guga, oo xambaaraya kuuskuus badan laakiin ka yar. Godadka caadiga ah, garabka sare oo aan lahayn naqshad jilicsan, wax ka beddel sahlan.
Isuzu Technology Rear Axle: Miisaanka khafiifka ah, qallafsanaan wanaagsan iyo xoog, culeys qaadasho sare, bareeg siman